श्रीमती गर्भवती भए श्रीमानले यसरी स्याहार सुसार गर्नु पर्छ, सम्बन्ध मात्र होइन कि जीवनकै कुरा हो - Babal Khabar
जब गर्भमा बच्चा रहन्छ, तब गर्भवती शारीरिक र मानसिक रुपमा स्वस्थ्य हुनुपर्छ । यसले गर्भको बच्चामा सोझो प्रभाव पार्छ । यदि आफ्नो बच्चाको मानसिक र शारीरिक विकास समुचित ढंगले होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने, गर्भवतीको ख्याल राख्नैपर्छ । गर्भवतीलाई प्रफुल्ल तुल्याउनुपर्छ । उनीहरु सकारात्मक, खुसी, सुखी भए गर्भको बच्चामा त्यसको प्रभाव पर्छ । यद्यपी गर्भवती आफुले मात्र चाहेर सबै कुराको ख्याल राख्न सक्दैनन् । त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो सहयोगीको रुपमा पतिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । पतिले त्यस्ता कुनैपनि काम गर्नु हुँदैन, जसले गर्भवती पत्नीमा चिन्ता थप्छ ।
१. सहायक बन्नुहोस् : गर्भावस्थामा महिलामा हुने समस्या, कमजोरी आदिलाई पतिले पनि अनुभूत गर्न सक्नुपर्छ । गर्भवती पत्नी के कस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेका छन् भन्ने कुरा मनन गरेर त्यही अनुसार सहयोगी व्यवहार गर्नुपर्छ । पत्नीको आत्माविश्वास बढाउने, खुसी राख्ने कुरामा पतिले भूमिका खेल्नुपर्छ । गाह्रो हुने घरायसी काममा पनि पत्नीलाई सघाउनुपर्छ । त्यस्ता कुनैपनि काम गर्न दिनुहुन्न, जो पत्नीले गर्न चाहदैनन् वा सक्दैनन् ।
२. बद्लिदो दिनचर्यालाई बुझौं : गर्भधारणपछि महिलाको काम गर्ने क्षमता कम हुन्छ, जो बच्चालाई जन्म दिइसकेको केहि दिनसम्म कायम रहन्छ । यस स्थितीमा घरको रुटिन नियमित नहुन सक्छ । पत्नीको अभावमा हुने कतिपय काममा पति अग्रसर हुनुपर्छ ।
३. सजगता अपनाउने : गर्भवती पत्नीलाई चिकित्सकहाँ पुर्‍याउने, सहि खानपान दिने, सहज पहिरन छनौट गरिदिने जस्ता कुरामा पतिले ख्याल राख्नैपर्छ । यसबेला तपाईले पत्नीको सामुन्ने राम्रो कुरा मात्र गर्नुहोस् । उसलाई राम्रो कुरा मात्र सुनाउनुहोस् । राम्रो काम मात्र देखाउनुहोस् । पत्नीको आसपास रहनुहोस्, ताकि उनले आफुलाई एक्लो र असुरक्षित महसुष नगरोस् । योग गराउनुहोस्, मर्निङ वाकमा लिएर जानुहोस् ।
५. सुन्दर हुनुको महसुष गराउनुहोस् : गर्भधारणपछि खानपानको कारण अक्सर पत्नी मोटी हुन्छन् । शरीर भद्दा देखिन्छ । यस्तो कुराले कति पत्नीलाई चिन्ता पनि हुन्छ । खासगरी सौन्दर्यप्रति सचेत महिलाहरु गर्भावस्था र त्यसपछि हुने शारीरिक परिवर्तनलाई स्विकार्न रुचाउँदैनन् । यद्यपी त्यस्ता कुराले उनीहरुलाई चिन्तित तुल्याउनु हुँदैन । नियमित व्यायाम र सन्तुलित दिनचर्याले आफ्नो शारीरिक बनौट पुरानै रुपमा फर्काउन सकिन्छ भन्ने कुरा बुझाउनु पर्छ ।
६. प्रसव पूर्व कक्षाको जरुरी : प्रसवको समयमा हुने के कस्ता अवस्था आउँछ भन्ने कुराको जानकारी पत्नीलाई हुनुपर्छ । कसरी प्रसवलाई सहज र कम पीडादायक बनाउने भन्ने कुरामा पनि पतीले आवश्यक जानकारी दिलाउनु पर्छ । ७. समझदारीताका साथ काम गरौ : जब पत्नी गर्भवती हुन्छ भने घरमा कुनै पार्टी, भोज आदि नगरौ । यस्ता कामले उनीहरुलाई झर्को लाग्न सक्छ र बोझिलो पनि ।
८. अनावश्यक परिवर्तनप्रति चनाखो रहने : गर्भावस्थामा विभिन्न किसिमको परिवर्तन हुन्छन् । त्यसमध्ये केहि स्वभाविक हुन्छन्, भने केहि अस्वभाविक । पत्नीमा कुनै अस्वभाविक परिवर्तन आइरहेको छ भने त्यसप्रति चनाखो हुनैपर्छ, ताकि गर्भवती पत्नी र गर्भको बच्चालाई नराम्रो असर नपरोस् । ९. घरलाई सजाउनुहोस् : जब पत्नी गर्भवती हुन्छे, घरको आन्तरिक सज्जामा पनि थोरै परिवर्तन गर्नुहोस् । घरलाई कुल र शान्त देखिने सजावट गर्नुहोस् । प्राकृतिक सुगन्धित फूलहरु सजाउनुहोस् । घरको पर्दा, बेड कभर सफा र आकर्षक राख्नुहोस् ।
Prevवैवाहिक जीवन रमाइलो कि एक्लो जीवन रोमाञ्चक ? यस्तो रोमान्चक रहस्य
nextमलेसियाबाट नेपालीको लागि दु:खद खबर, मलेसिया रोजगारी थप अनिश्चित बन्दै